ICiudad Real nezizathu zayo ezinhle zokuyivakashela - Sizobona ini lapho? | Ukuhamba kwe-Absolut
ICiudad Real idolobha laseSpain elomphakathi waseCastilla-La Mancha. Uma sesifikile lapho siya khona, okunye kokuhambela kokuqala okufanele sikwenze eCathedral yaseSanta María del Prado. Inesitayela seGothic esinemininingwane ye-Renaissance. Ngemuva kwayo kuneSonto laseSan Pedro, nalo elingenye yezindawo okufanele libhekwe ngoba yilo elidala kunawo wonke endaweni.
Vele, uma sikhuluma ngamasiko nasemakhulwini eminyaka adlule, lapho-ke ngeke sikhohlwe iMeya yePlaza. Ingenye yamaphuzu abalulekile eCiudad Real. Kulapha lapho sithola khona ihholo lakudala ledolobha elisukela ngekhulu le-XNUMX. Ngakolunye uhlangothi, kodwa esigcawini esifanayo, sizophinda sithole isithombe sika-Alfonso X the Wise.
Kusukela ngekhulu leshumi nane laziwa ngokuthi iPuerta de Toledo. Enye yezingxenye ezisele ze-Real Alcázar. Ukuba ngomunye wamaphoyinti avakashelwe kakhulu kule ndawo. Vele, enye yezinombolo ezifanele nayo ikule ndawo. Sikhuluma ngoDon Quixote nomnyuziyamu onikezelwe kuye. Kungumbukiso wemisebenzi yobuciko. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi kukhona neminye iminyuziyamu enamaqoqo emivubukulo.
Por USusana godoy kwenza iminyaka 3 .
Ukuxhumana nemvelo kuhlala kwenza umzimba wethu ungene ekuphumuleni okujulile. Ingenye yezinto ezihamba phambili…
Por I-Absolut Ciudad Real kwenza iminyaka 10 .
ISan Borce isitolo esinikela ngazo zonke izinhlobo zokudla okujwayelekile okuvela eLa Mancha, njengoshizi, iwayini, izigwaca, uwoyela womnqumo, ...
Incazelo yegama elithi Carnival
Lapho sizwa igama elithi zomkhosi kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba lapho sikhona, ngokuvamile la maqembu enza ...
Idolobhana elincane laseGargantiel
Por I-Absolut Ciudad Real kwenza iminyaka 11 .
Leli dolobha elincane libahlali abangaba yishumi sebebonke, abaziwa njengama-gargantieleros, futhi ngubani ...
Izitsha ezijwayelekile zeCiudad Real
Por I-Absolut Ciudad Real kwenza iminyaka 12 .
Imikhiqizo ye-gastronomy yeCiudad Real ihlukahlukene kakhulu futhi imnandi impela. Ushizi omuhle weManchego ujwayele ...